lip cream အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Nyein Su Thar
Skin Food Fresh Fruit lip
👄စေးကပ်ခြင်းမရှိဘဲ သန့်ရှင့်သပ်ရပ်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အဆီများကိုစုပ်ယူပေးပြီး ချောမွေ့လှပတဲ့ အသားအရေကိုရရှိခံစားစေပါတယ်။👄နှုတ်ခမ်းသားနဲ့ပါးပြင်ကို အရောင်မတူတဲ့ colour (3)မျိုးနဲ့လှပစွာ လိမ်းခြယ်နိုင်မဲ့ Fresh Fruit lip & cheek လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
👄Vegetable Oil ပါဝင်လို့ မျက်နှာပြင်ကိုစိုပြေတောက်ပစေပါတယ်
👉🏻3. Cherry Tomato
👉🏻5. Fruits Mix
👉🏻7. Dried Plum
👄အရောင်(7)ရောင်ရှိပါတယ်ရှင့် အရောင်တွေအားလုံးကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်။နှုတ်ခမ်းသားပျက်စီးမှုလုံးဝမရှိဘဲ ဆိုးထားမှန်းမသိသာလောက်အောင်နှုတ်ခမ်းသားပေါ်မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့စိုပြေလှပစေပါတယ်
🌈မှာယူလိုပါက👉🏻 09791873868 မှတစ်ဆင့်မှယူနိုင်ပါတယ်ရှင့်
🛍preorder -3weeks (waiting time)
💯100% Authentic from Korea Official Counter
Official counter ကနေပဲဝယ်တာမို့လို့ Bar code ,Quality check & expiry date တွေပါပါတယ်
အမည်: lip cream